सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएकाले विपन्न भत्ता नपाउने ! - Banking Khabar
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएकाले विपन्न भत्ता नपाउने !
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने घरपरिवारले विपन्न भत्ता नपाउने भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिब घरपरिवारलाई विपन्न भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको यो कार्यक्रमको कार्यविधि मस्यौदामा सामाजिक भत्ता पाइरहेका एकाघरका व्यक्तिले विपन्न भत्ता नपाउने उल्लेख छ ।
महामारीको समयमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुले आफूले रोजगार गुमाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ । रोजगार गुमाएका असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई स्थानीय तहको सिफारिसपछि १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । यो पनि एक पटकका लागि मात्रै उपलब्ध हुनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार